Maitiro ekugadzirisa matambudziko neWi-Fi muIOS 8.4.1 | IPhone nhau
Ignacio Sala | | iOS 8, Zvidzidzo uye zvinyorwa
Iyo yazvino vhezheni yeIOS 8, iyo Apple yakaburitsa mavhiki mashoma apfuura, ichimhanyisa kuvhara mipanda yekuchengetedza yakashandiswa kupaza kwejeri, inoita kunge yakanganisa mashandiro eiyi yazvino vhezheni isati yatanga iOS 9 svondo rinouya. Kunyange chiri chokwadi kuti iyi dudziro yanga isinganyanyo shandiswa kuApple sezvo ma hackers ataura kuti vachiri kugona kuzviita, vakanyanya kubatwa vave vashandisi vari kutambura nematambudziko ese neiyo Wi-Fi yemidziyo yavo, uye nebhatiri, iro risinganzwisisike kupera pasina kushandisa foni.
Nhasi muActualidad iPad tiri kuzokuratidza diki gwara mune yatiri kuzokuratidza akati wandei sarudzo kuti mudziyo wako ushande sepakutanga. Kana pasina rimwe rebasa iri, isu tinogara tine nzira yekupedzisira yekusvika kuApple Chitoro nekumhan'ara chiitiko ichi, kunyangwe zvichinyanya kuita nekutevera nhanho dzakatsanangurwa pazasi, dambudziko richagadziriswa.
1 Kutangazve mudziyo
2 Dzorerazve network marongero
3 Tangazve iyo Router / Modem
4 Dzima Wi-Fi network kubatana
5 Chinja iyo DNS yekubatana kwako nekuda kweGoogle
6 Dzosera kuIOS 8.4.1
Kune izvi isu tinofanirwa tinya bhatani reKumba uye bhatani remagetsi (kunze kwemabhatani evhoriyamu hatisisina anowanikwa) kwemasekondi gumi. Iyo chishandiso inozozvitaridza isu apuro pachiratidziro inoratidza kuti iri kutangazve. Mushure memasekondi mashoma (zvinoenderana nemuenzaniso) chishandiso chinodzoka pakuratidza block screen.
Iyi nhanho inogona kusanzwisisika sezvo zvese zvinongedzo zveWifi zvatakachengeta pane yedu kifaa zvangoerekana zvadzimwa, kunze kwekunge tave neICloud keychain yakaiswa iyo inozotangazve data rezvakabatana kubatana. Kuti tiite izvi tinoenda kuZvirongwa> General> Reset uye isu tinonongedza paReset network marongero.
Tangazve iyo Router / Modem
Dzimwe nguva nhanho yakapusa iri pachena kwazvo, asi tinoirasa nekuti mukufunga kuti haifanirwe kukanganisa mudziyo wedu. Chero chikonzero, chero router / modem yedu inogona kunge yakakanganiswa nechimwe chinhu chiri kukonzera matambudziko nechiratidzo chayinoburitsa.
Dzima Wi-Fi network kubatana
Natively Apple inomutsa nzvimbo kuburikidza neWifi, asi muzviitiko zvakawanda kumisa sarudzo iyi kugadzirisa matambudziko ekubatana. Kuti tiite izvi tinoenda kuZvirongwa> Zvakavanzika> Nzvimbo> Sisitimu masevhisi. Tevere tinoenda kune yeWi-Fi network yekubatanidza tebhu uye kuimisa. Iye zvino isu tinofanirwa kutangidza chigadzirwa chedu kuti shanduko dziite.
Chinja iyo DNS yekubatana kwako nekuda kweGoogle
Dzimwe nguva chigadzirwa chedu hachinyatso batana sezvachinofanira kuita iyo DNS yemupi wedu saka mhinduro yakanakisa ndeyekushandisa yeGoogle 8.8.8.8 uye 8.8.4.4, ayo akasunungukawo.
Dzosera kuIOS 8.4.1
Kana isu tisina kuita yakachena kuisa... Sokunge isu tadzorera yapfuura kopi yeiyo system. Kuti utonge dambudziko iri, zvakanakisa kuita kudzoreredza kutsva kwechigadzirwa chedu pasina kurodha chero backup yatakachengeta pakombuta yedu.
Kana zvese zvimwe zvikatadza, pamwe matambudziko nehunhare yeWi-Fi yedhivha yako haina hukama nesoftware, asi pane iyo Hardware yeyako mudziyo. Mune ino kesi zvakanakisa kutaura neApple Chitoro kuti uwane dambudziko.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 8 » Maitiro ekugadzirisa matambudziko neWi-Fi muIOS 8.4.1
Enrique Ketichi akadaro
Ndatenda zvikuru, ndanga ndine dambudziko rekuti ndakabatanidza ndikabvisa munguva pfupi, ndanga ndichiiyedza kubva nezuro uye yakashanda zvakakwana ini ndicharamba ndichiyedza (yakandishandira nekuchinja iyo dns ikaita 8.8.8.8, 8.8.4.4
Pachave nedambudziko ndikariisiya rakadai mukufamba kwenguva ???
Pindura Enrique Ketichi
Zvese zvatichaona pane iyo iPhone 6s